Howl-galo Qorsheysan Oo Ka Socda Deegaano Katirsan Jubada Hoose. | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Howl-galo Qorsheysan Oo Ka Socda Deegaano Katirsan Jubada Hoose.
Howl-galo Qorsheysan Oo Ka Socda Deegaano Katirsan Jubada Hoose.
Ciidamada Kumaandooska Xoogga dalka Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorsheysan ka sameeyay deegaano ka tirsan Gobolka Jubbada Hoose, iyadoona faah faahin ay kasoo baxayaan howlgalkaas.
Ciidamada ayaa howlgalka sigaar ah uga sameeyay duleedka deegaanka buulo-gaduud oo hoostaga Mgaalada Kismaayo, waxaana la sheegay inta uu socday howlgalka in lagu fashiliyay laba gaari oo nooca xamuulka oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa.
Taliyaha Guutada 16aad Kumaandooska Xoogga Dalka G/le Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa u sheegay in howlgalka ay ku fashiliyeen labo gaari xamuul ah, kuwaasi oo qaraxyo lagu soo raray.
Sidoo kale G/le Ismaaciil Cabdimaalik ayaa waxaa uu sheegay in Al-shabaab ay qaraxyadaas ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan Gobolka Jubbada Hoose ayna ka hortageen waa sida uu hadalka u dhigay.
Isaga oo sii hadlaayay Taliyaha Guutada 16aad Kumaandooska Xoogga Dalka ayaa waxaa uu tilmaamay in howlgalka sidoo kale lagu dilay xubno ka tirsan Al-shabaab oo ku sugnaa agagaarka deegaanka Buulo-gaduud.
Ciidamada Xoogga dalka ayaa maalmihii lasoo dhaafa howlgalo ka fulinayay deegaano ka tirsan Gobolada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Hoose, iyagoona dhawaan la wareegay deegaanka Janaale ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Previous articleDhageyso: Dadka kaxeeya gadiidka ee magaalada baydhabo oo amar lagu soo rugay.
Next articleKheyre Oo Kulan Xasaasi Ah Laqaatey Rugta Ganacsiga Dalka.